ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့တိုင်အောင် မီးနေသည်ဟာ ဘာကြောင့် ခါးနာ ၊ ဗိုက်နာ ခံစားနေရသလဲ? – BurmeseHearts
ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့တိုင်အောင် မီးနေသည်ဟာ ဘာကြောင့် ခါးနာ ၊ ဗိုက်နာ ခံစားနေရသလဲ?
ကလေးမီးဖွားပြီးစ မိခင်ရဲ့သားအိမ်ဟာ နဂိုကြက်ဥအရွယ်အစားလောက် ပြန်ဖြစ်ဖို့ ဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက် သူမဟာ ကလေးမွေးပြီးပေမယ့်လည်း ကလေးမီးဖွားတုန်းက ဗိုက်နာတဲ့ခံစားမှုလိုမျိုး ခံစားနေရပါတယ်။ သူမဟာ ဗိုက်ခွဲမွေးခဲ့သူဖြစ်ရင် ၊ မိန်မကိုယ်ညှပ်မွေးခဲ့သူဖြစ်ရင် ဒီဒဏ်ရာတွေက နာကျင်မှုကိုလည်း ခံစားနေရပါမယ်။ နာကျင်မှုတွေကြောင့် အထိုင်ခက် ၊ အထခက် ၊ ကိုယ်အလှည့်အပြောင်းလည်း ခက်နေနိုင်ပါတယ်။
မီးဖွားပြီးစမိခင်ဟာ ဘာကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ပံပိုးမှုကို အလိုအပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သလဲ?